Yini i-mushroom ephupha ngayo, incwadi yokuphupha - bheka amakhowe ephusheni
Ukuqoqa amakhowe empilweni yangempela ukuvivinya okuthula nokuthobisa, izinkulungwane zabantu ziyayithanda. Kodwa ngamaphupho konke akuyona into engavamile. Amakhowe angabonakali izinto ezinhle kuphela. Ukuze uqonde incazelo yokulala namakhowe, kufanelekile ukuhlaziya imininingwane ethile.
Ukubona amakhowe ngephupho ngokusho kwencwadi yephupho likaMiller
Le ncwadi yokuphupha inikeza incazelo elandelayo yamaphupho ngamakhowe. UMiller ubhala ukuthi uma uphupha amakhowe adle, khona-ke maduze uzoshada. Uma usuvele ushadile, ubuhlobo buyoba ngcono nakakhulu. Kodwa udle intombazane endizayo i-fly agaric ithembisa ukuthi ayijabuli emshadweni. Ukuze ube ngamakhowe amakhowe futhi uqoqe kuwo amakhowe anamandla anempilo - ekuchuma kwezezimali, engenayo engalindelekile. Amakhowe amhlophe - ukuphumelela ebhizinisini nakuzo zonke izinyathelo. Amakhowe anobuthi - noma ukuphazamisa abangane, noma ukuphila okude. Ukuqoqa emakhowe amaphupho anezigqoko ezibomvu noma ezibomvu - izindaba ezimnandi ezisheshayo, izenzakalo ezinhle. Kukhona amakhowe omisiwe noma omisiwe noma izitsha ezivela kubo - ukuthula nokuphila emndenini, njengoba kubikwa uMiller.
Iyini iphupho lamakhowe ebhokisini lephupho likaVanga
UClairvoyant Vanga wachaza amakhowe ngephupho njengophawu lokugula noma ezinye izinkinga. Kodwa-ke, yonke i-glade yamakhowe amakhulu - esimangala kakhulu futhi esimnandi. Ukuqoqa ibhasikidi egcwele yamakhowe anobuthi - udumalekile ebhizinisini ohlala kulo, ngeke uthole inzuzo. Amaphupho e-mushroom wormy - ukukhashelwa umngane omuhle. Uma othile ekuphatha ngamakhowe ephusheni, ungamangalelwa ngokungamangalelwa. Amakhowe omisiwe - kulesi sifo, kusho uWang. Iphupho lapho uphathwa khona ngamakhowe omisiwe noma amanye amakhowe kusho ukuthi maduze uzobhekana nokunyundela ekhelini lakho. Ungase uphuphe iphupho: uthola amakhowe amancane, kodwa ngokuzumayo uqala ukwandisa usayizi. Ngisho nokuba mkhulu, kusakhula. Khona-ke iyahlukana, imbewu iyahamba kuyo yonke indawo. Iphupho elinjalo lifanekisela usongo lwenuzi, lapho amazwe amaningi azohileleka kuwo. Mhlawumbe, kuzokuthinta wena ngokwakho, kuzodingeka uhlanganyele kuyo. Futhi umsebenzi wakho ukuwugcina umhlaba kusukela kulolu busuku obunzima.
Ukuphuza i-mushroom - incwadi yephupho kaFreud
I-mushroom encwadini yephupho kaFreud - uphawu lwephallus. Ukubona inamba enkulu yamakhowe noma ukuwaqoqa - unobomi obuhlukile bobulili nabalingani abaningi. Ukuhlanza amakhowe ngephupho - ungathanda ukuhlala phansi. Ukubamba i-mushroom esandleni sakho kuyisibonakaliso sokuthi uthandana nokushaya indlwabu. Ukufisa noma ngandlela-thile namanje ukupheka amakhowe - kufanele unake impilo empilweni yangasese. Ukuphonsa amakhowe - ngokuyimfihlo ufuna ubuhlobo obufanayo bobulili obufanayo. Ukubona amakhowe amakhulu aqinisekisa ukuvela kwezingane zakuqala noma abazukulu.
Ukuchazwa kwesifungi ephusheni ngokusho kwencwadi yokuphupha yeMeneghetti
Ngokushesha uzothola ukushayela ucansi oluqinile, kodwa ngeke luhlale isikhathi eside. Kukhona amakhowe amaningi - uhola ngendlela ekhululekile. Ukuze ubone amakhowe akhula endaweni engalindelekile, isibonelo, phansi endlini noma encwadini - empeleni umuntu uhlela isinyathelo esiyingozi kakhulu. Nokho, okwamanje ingozi ayiyona isikhathi esifanele kakhulu.
Leli bhuku lephupho lisekelwe ekuchazeni izimfanelo zabantu. Mhlawumbe uzimisele ukumangalela abanye abantu ngamacala okusolwa. Uma ephusheni unenhlanhla ngokwanele ukuthola i-mushroom emhlophe emhlophe, linda uphapheme ngenhlanhla nenzuzo. Kodwa ukufika e-glade egcwele amakhowe kusho ukuthi empilweni yangempela umuntu unezitha, futhi maduzane bazozama ukumkhohlisa. Mhlawumbe benza manje, ngakho-ke qaphela. Ngenkathi enjalo, ngisho nabantu abaseduze abakwazi ukwethenjwa ngamaphesenti angu-100. Amakhowe amakhowe ayizinambuzane ziwuphawu lobunzima nezifo. Ukubona amakhowe amakhulu - unokuhlakanipha. Mhlawumbe, ufunde okuthile okubalulekile noma wakhuphuka ekuthuthukisweni. Ulingwa ukuba udle amakhowe - usolisa kakhulu abantu, futhi uvame ukukhathazeka ngezicucu. Ngeshwa, lezi zimfanelo zihlukumeza abantu abajwayele ukuvela kuwe. Ibhasikidi eliphelele lomkhumbi noma amanye amakhowe liphupha ukuthi maduzane uzothola esimweni esingathandeki, lapho kuzodingeka uziphendulele ngaphambi kwezihlobo okubaluleke kakhulu kulokhu.
Amakhowe anobuthi afana namaqaba angenisa izinkinga nezithiyo, futhi adle - izindaba ezinhle. Uma uphupha ukuthi udla amakhowe anobuthi, omunye wabangani bakho maduzane uzokukhaphela. Futhi uma umuntu ephupha izitsha okumnandi ezivela emakhowe amnandi - enhlanhla kanye nezenzakalo ezijabulisayo. Amakhowe amaningi anezigqoko ezinombala obomvu noma obomvu athathwa njengento ekhanga kakhulu kumuntu wobulili obuhlukile. Ukubona ephusheni i-mushroom enkulu, izikhathi eziningana eziphakeme kunokukhula komuntu, ekuphumeleleni komsebenzi. Umsebenzi wakho ngeke uqondwe.
I-Roma Dream Book
Iphupho lapho uyala khona isidlo samakhowe ama-cep esikhungweni esithile futhi uyadla kusho ukuthi akufanele ukhathalele kakhulu ukufaneleka kwakho, ngisho noma ungaqiniseka ngakho. Izinzuzo lokhu ngeke zilethe.
Kungani amakhowe aphupha amaphupho - okusho ngokusho indodana dream of Tsvetkov
Iphupho lamakhowe, ngokusho kwale ncwadi yokuphupha, kusho ukuthi uthola iseluleko esibalulekile kubantu asebekhulile, kodwa ungafuni ukumlalela. Kungcono ushintshe ingqondo yakho ukuze uphumelele futhi ugweme ukuhlupheka. Amakhowe anobuthi afanekisela injabulo esheshayo, nokuwadla - ukuhlala iminyaka eminingi. Ukubona izidumbu zezinambuzane kubonisa ukuthi uzoletha okubi kakhulu kulabo abakuzungezile, kodwa maduzane uzokukhokhela. Ibhasikidi eligcwele ngamakhowe livele - umndeni wakho uzoba nokuchuma kwezezimali.
Ngokwencazelo yale ncwadi yephupho, ukuqoqa amakhowe ehlathini kusho ukuthi imisebenzi yomuntu iyovuzwa ngokugcwele. Kukhona amakhowe othosiwe ukhilimu omuncu - impilo enjabulweni nokuchuma. Ukuze ubone amakhowe anobuthi ephusheni - ungaphumelela esimweni esingathandeki ngenhlanhla, udle - uphile ugugile kakhulu.
Ukuqoqa amakhowe ehlathini kusho ukuthi uzothola ngokugcwele ngokuzikhandla kwakho, ufunde incwadi yephupho. Amakhowe amhlophe aphumelele kuyo yonke imisebenzi kanye nemali emikhulu yemali. Bheka izinyoni ze-agarics - mhlawumbe maduzane uzothola esimweni esinamahloni, kodwa ngosizo lwengqondo yakho kanye nokuphendula okuhle ungaphumelela kulo udumo. Nokho, uma uzama fly agaric ukunambitha, khona-ke umphumela ngeke ube omuhle kakhulu. Siza ukuvala noma abangane. Owesifazane leliphupho libikezelwa umshado ongathandeki.
Kule ncwadi yokuphupha, amakhowe afanekisa izilingo zesifazane ezenzeka empilweni yakho kuzo zonke izinyathelo. Mhlawumbe uzizwa engenandaba nabantu, kodwa uyaziqaphela ukuthi angakukholwa kuze kube sekupheleni. Okubaluleke nakakhulu yilokho okwakucatshangelwe kulophupho. Uma intombazane ethandekayo iqoqa amakhowe kuye, maduze uzoyikhohlisa, iyodlala umdlalo ophindwe kabili. Kungakhathaliseki ukuthi lokhu kugcwele ukuhlukana kobudlelwane, akunakwenzeka ukusho, kuxhomeke ezinkambweni eziningi. Uma owesifazane ephupha omunye umuntu wesifazane ehlanganyela ekuqoqeni amakhowe, iziqephu ziboshwe ngokumelene naye. Akukakushiywa ukuthi ube nomphikisi othandweni ngaphambili. Futhi uma owesifazane ebona ibhasikidi lonke lamakhowe emnyango wendlu yakhe, isibonelo, uzozama, ukukhaphela kuzovela ohlangothini olungalindelekile. Ungakholelwa ngokukhohlisayo emazwini nezithembiso ezithandekayo. Abanye abantu bathanda ukudlala eminye imizwelo yabantu. Lapho intombazane iphupha ukuthi idla amakhowe okuthosiwe, kusho ukuthi usezinkingeni nabalingani bayo emsebenzini. Amakhowe aphelile - izinyembezi nokukhungatheka. Amakhowe akhula emvula ephusheni - injabulo izofika maduzane, i-black streak empilweni izophela. Kudingekile ukuthi uhambisane nesimo esihle nesinyathelo.
Ukubamba inhlanzi ngenduku yokudoba ephusheni
Iyini indiza ewelayo iphupha?
Kungani izingane ziphupha? Ukuchazwa kwamabhuku eyaziwa ngephupho
Izinwele zezinwele ezimfushane kakhulu zabesifazane abancane
Isibonelelo sokusinda endlini yokuhlala
UJoseph Prigozhin washaywa yizintandokazi zokungalindelekile
Kungani abantu bathandana, kodwa bahlanganyele?
Indlela yokuvikela ingane yakho ekushiseni
Isizinda sothando nomshado nguFeng Shui
Kusho ukulahlekelwa isisindo
Uthando olungenakwenzeka, iseluleko se-psychologist
Izimfihlo ze-Arab nobuhle zokupheka
Ukwakhiwa kwesakhiwo - intsha engunaphakade yesikhumba
I-Dima Bilan ishintshile ngokuphawulekayo, isithombe